Zvimwe zve iTunes paMac; usaora mwoyo | Ndinobva mac
Paunoverenga musoro wenyaya ino, unogona kuzvibvunza ... Parizvino, hauna chokwadi chekuti ungabatanidza sei chishandiso cheIOS kune iTunes pane Mac kana PC? Zvakanaka, chokwadi ndechekuti vhiki yekupedzisira shamwari yakatenga iMac makore maviri mushure mekuve neiyo iPhone. Kufanana nevazhinji vedu, iwe wauya kuApple nyika kuburikidza neiyo iPhone, ipapo nePad Pro, uye ikozvino iMac.
Akange agaro gadziridza iyo iPhone ne iPad kuburikidza neOTA pasina kudiwa kwecomputer uye paakazvitenga, kutanga kwavo zvakare kwakaita pasina komputa. Icho chokwadi ndechekuti paakadzima Mac uye akaita yekutanga gadziriso, akatanga kubuda kuti abatanidze iPhone yake ku iTunes kuti agone kuenzanisa mimhanzi uye chii chakamushamisa kuti iTunes Akamuratidza message pascreen yaimusiya achitaura ega.
Pawakatanga kubatanidza yako iPhone ku iTunes, iye amene akavhura skrini umo maakapihwa sarudzo mbiri. Yekutanga yaive yekumisikidza iyo iPhone se iPhone nyowani, uye yechipiri yaive yekudzorera iyo iPhone neyaivepo backup. Pamberi peichi skrini Akapindura ipapo ipapo kwaive kudimbura iyo iPhone kubva kuTunes nekutya kudzima data raive pairi.
Akabva andibata ndokutsanangura zvakaitika. Zvakajairika kuti iye afunge zvaaifunga uye ndeyekuti iyi yekushandisa nzira haina kunyatsojeka. Ndiri kuda kugovana newe, kuitira kana iwe usina chokwadi kana, kuti kana iTunes ikati gadzira iyo iPhone se iPhone nyowani, zvinoreva kuti ichaizoigadzira se iPhone nyowani inobatana neiyo iTunes, iyo, sekuziva kwako, inogona kungoenderana chete neraibhurari yeTunes
Apo, pane zvinopesana, tinodzvanya pa dzosa kubva kubhagidhi, iyo sisitimu inodzima iyo iPhone uyezve ndokudzoreredza iyo kopi iyo isu yatinotaura nayo. Naizvozvo, isu tinofanirwa kuve pachena kuti izvo izvo iTunes zvinotitaurira, mumutauro unonzwisisika, iwe unoda kusiya iyo iPhone sezvazviri uye batanidza kune iTunes kana iwe unoda kuidzima uye kutanga patsva?
Paunobatanidza iPhone kana iPad kekutanga kuenda iTunes, kana iwe ukabaya Seta se iPhone nyowani, haina kudzima iyo data iri pairi.
Kune rimwe divi, kana chishandiso cheIOS chakabatana neTunes, unogona kuyananisa nacho kuburikidza neWiFi. Kuti uite izvi unofanirwa kubatanidza chishandiso, chichiisa kuburikidza iTunes uye pachiratidziri chikuru, enda pasi kunzvimbo iyo kwaunokwanisa kumisikidza kuenzanisa kuburikidza neWiFi. Ndiri kuenda kuita akateedzana ezvinyorwa zvine chekuita nekushanda kweTunes kune avo vese vachiri kusahadzika nazvo uye nekutsanangura nhau dzakabatanidzwa mune dzazvino vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Zvimwe zve iTunes paMac; usaora mwoyo
Iyo HomePod haisi yega mutauri akangwara kusiya zvigunwe pamatanda